Masviriro andakaita shamwari yangu after ndamuwana achiyamwa mboro yebrother yangu | Nhau Dzevakuru
Home Pictures and Videos Masviriro andakaita shamwari yangu after ndamuwana achiyamwa mboro yebrother yangu
Masviriro andakaita shamwari yangu after ndamuwana achiyamwa mboro yebrother yangu
Masviriro andakaita shamwari yangu after ndamuwana achiyamwa mboro yebrother yangu. Ndakasvika kumba ndikawona mukoma wangu achiyamwiwa mboro neshamwari yangu! Ndakakura ndichigara nemukoma wangu ainge ane basa rake rakanaka chose twese twaungada ainge anatwo. Mukoma vaifamba ne BMW 7 series, apa taigara kuSouth Africa.
Semunhu ainge achiita matric yake, ndainge ndine kamwe kababe kandaida zvekuti, ndokubva mumwe musi ndamuti handeyi to study kumba. Babe ndaitoziva kuti rinonakirwa neni saka painge pasina nyaya, kuziva kwangu mukoma vaifanirwa kunge varikubasa asi ndakasvika ndikawona mota yavo iri mugarage.
Tichangopinda muStudy mukoma vakauya ndikava introducer kuna Sarah, ndakavhunduka ndakuwona mwana achiita kunyara nekuita blush kuita kunge achanyura musofa. Mukoma vakanditi manje hapana kana drink yekuti ndipe Sarah I was shocked nekuti ndaiziva kuti ndainge ndasiya drink mufridge the previous day asi ndakangoti pamwe yapera. Ndakapihwa mari ndokubva ndayenda kushop kunotenga drink, I told Sarah kuti ndirikuuya just now you can sit mu lounge ne brother yangu but nekunyara kwaiyita Sarah ndakashaya kuti aizokwanisa here.
Sarah akasekerera, ndakabuda ndikayenda kuma shops and ndakaita almost 40 mins and pandikadzoka ndakawana Sarah akaita kupfugama achiyamwa mboro yebrother yangu. Ndakamboita kunge ndaita chidzimira so ndakamira padoor apa vanhu they were busy apa mukoma vachiita noise vachichemerera nekunakirwa.
Ndakaramba ndakamira so ndichiwona ndokubva ndavhura door asi hapana akandiwona ndakaramba ndakamira ndichinzwa vanhu vachitamba vese kusvikira mukoma vati aahhhh ahhh ndiye tsaaa tssaaaa huronyo huchizara mumuromo maSarah apa achibva amedza hake ndipo paakanditarisa ndokubva akuti sori sori ndikabva ndangoyenda kuroom kwangu. Mukoma vakabva vabuda hameno kwavaiyenda apa inini ndainge ndisisina kana shungu dzekuverenga anymore. Sarah was just apologising asi ndainge ndatobhoikana already.
Ndakazongogara hangu pabed ndikati let me know when you want to go, Sarah could see kuti ndainge ndabhoikana zvekuti and I just started falling asleep. My brother was no where to be found and it was now late for Sarah kuti ayende kumba netsoka. Ndakafonera brother yangu ndikati please come muyendese Sarah kumba kwavo, vakangoti will be there in an hour. Sarah akafonera kumba kwavo ndokuudza mai vake kuti she was with me and achanonoka kuuya.
Ndakaramba ndakarara ignoring all her apologies apa chainyanyorwadza Sarah knew kuti ndinomuda and ainge asati ambondidya mboro. Ndakazongonzwa zip yebhurugwa rangu richivhura handina kuita nharo kana kuramba, mwana ainge ane malips akakura mhani rega mukoma vachemerere kudaro. Mboro yangu yakangonzi bvooo mumuromo ndokubva atanga kutambisa ka tough ring pamusoro wemboro zvainyerekedza nekunakidza apa ropa rese richibva ramhanya muviri wese. Ndakatangawo kutambisa kabhinzi kake ndikawona mwana ayita waya nekunakirwa, zvekuti ainge achiri kavirgin hazvina kushanda especially nekutota kwainge kwaita beche rake.
Ndakatanga kupusha musoro wemboro yangu slowly munhu achingopushira kumashure achitya kuti ndipinze yese, ndakazonyengerera ndichizevezera munzeve ndikati I will be gentle but aingotya. Ndakamboda kuramwa but told myself kuti munhu uyu dai ndanonoka aboorwa namukoma. Ndakazongoti schweee ndokubva aitetsura mhere kuita kunge munhu abaiwa pachironda. Sarah aida kuzvishingisa asi airwadziwa ndakamboburitsa ndokudzosera futi kusvikira ajaira, hazvina kutora nguva munhu ainge akutokoirirawo.
Ndakazoita serious ndakuwona kuti nguva yatapihwa namukoma yainge yakukwana, ndakamukoira ndakasimudza gumbo one ndikanzwa mwana akushinyira apa achibatirira. At one point ndainge ndakutotadza kuita move munhu ayita kundi locker nemakumbo, paakandisiya ndamukoira zviri fast apa waingonzwa aah aaahhh ahhh aaahh mwana achikwirwa ndipo pandikabva ndatunda. I think Sarah akatunda ka two or three, pakazosvika mukoma ndainge ndakangoita serious kuratidza kuti handina kufara nezvavainge vaita. Takayenda kunomusiya kumba kwavo then pakudzoka mukoma tried to apologise and I just ignored it.
Masviriro andakaita shamwari yangu
Previous articleMboro yakangonzi shweee vachibva vanyemwerera zvavo
Next articleNdakabatwa nahubby ndichisvirwa nechikomba kanight dress kari muchiuno
6 Pics of Mzansi’s 19 year old Boooty Queen that has been causing chaos on Social Media
H0TTEST ON INSTAGRAM! Madam Vanodhonhedza Musika
Minnie Mlungwana, H0TTEST BABEZ ON SOCIAL MEDIA – PICTURES
ZviDanger zvepaInstagram causing chaos mumba mangu – Pictures